Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » FAA waxay iska indho tiraysaa waajibaadka kursiga Kongareeska sannadkii saddexaad
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Rakaabku way weynaadaan oo weynaadaan, kuraasta ayaa sii yaraata, diyaaraduhu way buuxsamaan, boorsooyin badan oo la soo qaado ayaa la keenaa diyaaradaha, FAA waxay sii wadaa inay u oggolaato soo saarayaasha diyaaradda inay ku tiirsanaadaan xogta duugga ah, mala-awaalka, iyo jilitaanka halkii xog cusub ama qaban lahayd imtixaano cusub.
FAA waxay sankeeda ku dul tuuraysaa Kongareeska iyo rakaabka maalin kasta waxay diidan tahay inay wax ka qabato labadan arrimood ee muhiimka ah ee badbaadada duulista.
FlyersRights.org waxay qorshaynaysaa inay soo gudbiso codsi sharci -dejin cusub haddii FAA diido inay si dhakhso ah wax uga qabato.
43 ka mid ah daadgureynta deg -degga ah ee ay FAA dusha ka saartay, mid kaliya ayaa lagu qabtay garoonka kursiga 28 inji.
FAA ficil ku saabsan heerarka kursiga iyo daad -gureynta deg -degga ah ayaa noqotay laba sano oo la soo dhaafay Talaadadii, Oktoobar 5, 2021, FAA -na ma muujin wax caddeyn ah oo ku saabsan in horumar laga sameeyay labada arrinba.
Koongarasku wuxuu ansixiyay FAA Xeerka Dib -u -oggolaanshaha Oktoobar 5, 2018. Sharcigu wuxuu u baahday FAA inay dejiso heerarka kursiga ugu yar oo ay qiimayso heerarkeeda daadguraynta degdegga ah ugu dambayn Oktoobar 5, 2019. Iyadoo FAA ay isugu yeertay Guddiga Xeer -dejinta La -talinta Ka -qaadista Degdegga ah, FAA ma aysan sii deyn Guddiga May 2020 u wargaliyaan Congress -ka ama dadweynaha. Warbixintu waxay ka koobnayd 23 talooyin si loo casriyeeyo loona casriyeeyo hannaanka shahaadaynta daadguraynta.
"The FAA waxay sanka ku haadinaysaa Congress -ka iyo rakaabka maalin walba waxay diidan tahay inay wax ka qabato labadan arrimood ee muhiimka ah ee badbaadada duulista, ”ayuu yiri Paul Hudson, Madaxweynaha FlyersRights.org. “FAA waxay u baahan tahay inay la qabsato waqtiyada. Rakaabku way weynaadaan oo weynaadaan, kuraasta ayaa sii yaraata, diyaaraduhu way buuxsamaan, boorsooyin badan oo la soo qaado ayaa la keenaa diyaaradaha, FAA waxay sii wadaa inay u oggolaato soo saarayaasha diyaaradda inay ku tiirsanaadaan xogta duugga ah, mala-awaalka, iyo jilitaanka halkii xog cusub ama qaban lahayd tijaabooyin cusub. ”
FlyersRights.org ayaa qorshaynaysa inay soo gudbiso codsi xeer -dejin cusub haddii FAA ay diido inay si dhaqso ah wax uga qabato. Codsigiisii ​​sharci -dejinta ee 2015, oo loogu magac -daray "Kiiska Kursiga Diyaaradda ee Dhimista leh" ee Maxkamadda Racfaanka Circuit DC, waxay gacan ka geysatay inay iftiimiso wax -qabad la'aanta FAA iyo heerarka duugoobay.
Bishii Sebtember 2020, Xafiiska Kormeeraha Guud ee Waaxda Gaadiidka (OIG) ayaa soo saaray warbixin si faahfaahsan u ah khaladaadka badan ee ku jira shahaadada daadgureynta degdegga ah ee FAA iyo hannaanka tijaabinta. Waxaa xusid mudan, OIG wuxuu shaaca ka qaaday in FAA marin habaabiyay FlyersRights.org sanadkii 2018 markii, markii la diidey codsigii xeer -dejinta mar labaad, FAA waxay sheegatay inay kormeeraysay bannaanbaxyo badan oo daad -gureyn ah oo ka dhacay kursiga kursiga 28 inji. FAA waxaa ku jiray seddex fiidiyow waxayna cadeeyeen in lagu sameeyay 28 inji. Laakiin dhab ahaantii, 43 ka mid ah daadgureynta deg -degga ah ee ay FAA dusha ka saartay, mid kaliya ayaa lagu qabtay garoonka kursiga 28 inji. Banaanbaxyada kale waxay u dhexeeyeen ilaa 38 inji, halka 13 ka mid ah 43 mudaaharaad aysan tixraac ku samayn garoonka, ballaca, ama cabbirka gabi ahaanba.